FIX REGEDIT.EXE CRASHES REHEFA MIKAROKA AMIN'NY REGISTRY - MALEFAKA
Fix Regedit.exe crashes rehefa mikaroka amin'ny Registry
Navoaka tamin'nyNohavaozina farany: Febroary 17, 2021
Raha vao haingana ianao no nanavao na nanavao Windows 10 avy eo rehefa mikaroka amin'ny alàlan'ny Registry Editor dia haharitra mandrakizay ny fanaovana ny fikarohana, ary rehefa manindry ny fanafoanana ianao dia mianjera ny regedit.exe. Ary rehefa mianjera ny Registry Editor dia manome hafatra diso Nitsahatra tsy niasa ny tonian-dahatsoratry ny rejisitra . Ny olana lehibe dia toa ny halavan'ny fanalahidin'ny rejisitra napetraka ho 255 bytes ambony indrindra. Ankehitriny rehefa mihoatra io sanda io mandritra ny fikarohana, dia mianjera ny Regedit.exe.
Mandritra ny fikarohana rejisitra, ny sanda iray na maromaro dia tsy maintsy manana halavana mihoatra ny 255 bytes, ary rehefa hita ny zana-tsipìka, dia mihazakazaka hatrany amin'ny loop tsy misy farany ny tonian-dahatsoratra rejisitra. Rehefa manandrana manafoana ny fikarohana ianao dia mianjera ny regedit.exe satria tsy misy safidy hafa. Koa raha tsy mandany fotoana dia andeha hojerentsika ny fomba fanamboarana ny Regedit.exe Crashes rehefa mikaroka amin'ny alàlan'ny rejisitra miaraka amin'ny fanampian'ny torolàlana voatanisa etsy ambany.
Fomba 1: Mandehana SFC sy DISM Tool
Fomba 2: Soloy ny regedit.exe
Fomba 3: Ampiasao ny Tonian'ny Rejistra Antoko fahatelo
Ataovy azo antoka fa mamorona teboka famerenana sao misy tsy mety.
1. Sokafy Command Prompt. Ny mpampiasa dia afaka manao ity dingana ity amin'ny fikarohana 'cmd' ary tsindrio ny Enter.
2. Soraty izao manaraka izao ao amin'ny cmd ary tsindrio ny Enter:
3. Andraso ny dingana etsy ambony ho vita ary rehefa vita dia avereno indray ny PC.
4. Sokafy indray ny cmd ary soraty ity baiko manaraka ity ary tsindrio ny Enter aorian'ny tsirairay:
5. Avelao ny baiko DISM mihazakazaka ary miandry azy ho vita.
6. Raha tsy mandeha ny baiko etsy ambony dia andramo ireto manaraka ireto:
Fanamarihana: Soloy ny C:RepairSourceWindows amin'ny loharano fanamboaranao (Windows Installation na Recovery Disc).
7. Avereno indray ny PC-nao mba hitahiry ny fanovana ary jereo raha afaka manao izany ianao Fix Regedit.exe crashes rehefa mikaroka amin'ny Registry.
1. Voalohany, mandehana mankany amin'ny C:Windows.old lahatahiry raha tsy misy ny lahatahiry, dia tohizo.
2. Raha tsy manana ny fampirimana etsy ambony ianao dia mila izany Ampidino ny regedit_W10-1511-10240.zip.
3. Esory ny rakitra etsy ambony eo amin'ny desktop ary sokafy ny Command Prompt. Ny mpampiasa dia afaka manao ity dingana ity amin'ny fikarohana 'cmd' ary tsindrio ny Enter.
4. Soraty ao anaty cmd ity baiko manaraka ity ary tsindrio ny Enter:
takeown /f C:Windows egedit.exe
icacls C:Windows egedit.exe /grant%username%:F
5. Tsindrio Windows Key + E hanokatra File Explorer dia mandehana mankany C:Windows lahatahiry.
6. Mitadiava regedit.exe dia ovao ny anarany ho regeditOld.exe ary avy eo akatony ny rakitra explorer.
7. Ankehitriny raha manana ianao C:Windows.oldWindows lahatahiry avy eo kopia ny regedit.exe hatramin'ny C:Windows lahatahiry. Raha tsy izany, dia kopia ny regedit.exe avy amin'ny rakitra zip nalaina etsy ambony mankany amin'ny C:Windows folder.
8. Avereno indray ny PC mba hitahiry ny fanovana.
9.Launch Registry Editor ary azonao atao ny mikaroka tady izay manana habe mihoatra ny 255 bita.
Raha tsy te-hanaraka dingana sarotra toy izany ianao dia azonao atao ny mampiasa mora foana ny tonian-dahatsoratry ny antoko fahatelo, izay toa mandeha tsara ary tsy manana fetra 255-byte. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo tonian-dahatsoratry ny antoko fahatelo malaza:
Ahoana ny fanamboarana ny Printer tsy navitrika Error Code 20
Fix Numeric Keypad tsy mandeha Windows 10
Amboary ny CD/DVD Drive tsy afaka mamaky kapila
Manaova fandaharam-potoana fanakatonana solosaina amin'ny alàlan'ny Task Scheduler
Izany no fahombiazanao Fix Regedit.exe crashes rehefa mikaroka amin'ny Registry fa raha mbola manana fanontaniana momba ity lahatsoratra ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Aditya dia matihanina amin'ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao mazoto tena ary mpanoratra teknolojia nandritra ny 7 taona farany. Izy dia mirakitra ny serivisy Internet, finday, Windows, rindrambaiko ary torolàlana momba ny fomba.